နှားနို့သောကျခွငျးက COVID-19 ကို ကာကှယျနိုငျသလား ? ? ? – SoShwe
Home/Health & Beauty/နှားနို့သောကျခွငျးက COVID-19 ကို ကာကှယျနိုငျသလား ? ? ?
နှားနို့သောကျခွငျးက COVID-19 ကို ကာကှယျနိုငျသလား ? ? ?
So Shwe May 22, 2020	Health & Beauty Leaveacomment
မကွာသေးခငျက လူမှုကှနျရကျ Facebook မှာ နှားနို့ထဲမှာ Vitamin C ၊ Zinc ဓါတျနဲ့ Lactoferrin ပါဝငျတာကွောငျ့ နှားနို့သောကျခွငျးအားဖွငျ့ COVID-19 ကို ကာကှယျနိုငျတယျလို့ ဆိုထားတဲ့ ဆောငျးပါးတဈပုဒျပြံ့နှံ့ခဲ့ပွီး အဆိုပါဆောငျးပါးကို ပွနျလညျမြှဝသေူ ၁၅၀၀ ကြျောရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ နှားနို့သောကျခွငျးက COVID-19 ကို မကာကှယျနိုငျကွောငျး အခိုငျအမာပွောဆိုလာပါတယျ။ ဆရာဝနျတှရေဲ့ပွောကွားခကျြအရ နှားနို့ထဲမှာပါဝငျတဲ့ ပရိုတငျးဓါတျတဈမြိုးဖွဈတဲ့ Lactoferrin ဟာ ရောဂါပိုးတှကေို တိုကျထုတျနိုငျရာမှာ ကူညီပေးတယျဆိုတာ မှနျကွောငျးနဲ့ နှားနို့ထဲမှာပါဝငျတဲ့ Vitamin C နဲ့ Zinc ဓါတျဟာလညျး ကိုယျခံအားကိုမွှငျ့တငျပေးတာကလညျး မှနျတယျဆိုတာကို ထောကျပွပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ နှားနို့သောကျခွငျးတဈမြိုးတညျးက COVID -19 ကို မကာကှယျနိုငျကွောငျး နဲ့ ရောဂါပိုးကူးစကျခွငျးမခံရအောငျ လကျကိုမကွာခဏဆေးပေးပွီး နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့လူနာ အနားမှာမနဖေို့ သတိပေးထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီရောဂါပိုးကိုတိုကျထုတျနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျတှငျးခုခံအားတကျအောငျ အခွားသော အဟာရရှိတဲ့ အစားအသောကျတှဖွေဈတဲ့ ဆနျ၊ ဂြုံနဲ့ Vitamin C ကွှယျဝတဲ့ အသီးအနှံတှကေို စားသငျ့ကွောငျး ကွငွောပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
နွားနို့သောက်ခြင်းက COVID-19 ကို ကာကွယ်နိုင်သလား ? ? ?
မကြာသေးခင်က လူမှုကွန်ရက် Facebook မှာ နွားနို့ထဲမှာ Vitamin C ၊ Zinc ဓါတ်နဲ့ Lactoferrin ပါဝင်တာကြောင့် နွားနို့သောက်ခြင်းအားဖြင့် COVID-19 ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး အဆိုပါဆောင်းပါးကို ပြန်လည်မျှဝေသူ ၁၅၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက နွားနို့သောက်ခြင်းက COVID-19 ကို မကာကွယ်နိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုလာပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ နွားနို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Lactoferrin ဟာ ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ရာမှာ ကူညီပေးတယ်ဆိုတာ မှန်ကြောင်းနဲ့ နွားနို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Vitamin C နဲ့ Zinc ဓါတ်ဟာလည်း ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးတာကလည်း မှန်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက နွားနို့သောက်ခြင်းတစ်မျိုးတည်းက COVID -19 ကို မကာကွယ်နိုင်ကြောင်း နဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းမခံရအောင် လက်ကိုမကြာခဏဆေးပေးပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူနာ အနားမှာမနေဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီရောဂါပိုးကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်တွင်းခုခံအားတက်အောင် အခြားသော အဟာရရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ ဆန်၊ ဂျုံနဲ့ Vitamin C ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေကို စားသင့်ကြောင်း ကြေငြာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာအခွအေနေ။
Next COVID-19 ကိုတိုကျထုတျနရေတဲ့ ကာလအတှငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အိမျခွံမွရေငျးနှီးမွှုပျနှံမှုစြေးကှကျ။